Ny Kitapo Scrape dia natokana ho an'ny serivisy SEO ary manome orinasa sy freelancers miaraka amin'ny tolotra maimaim-poana maimaim-poana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa fitaovana SEO sy tondro zotra iray izany. Ankoatr'izay, ny Scrape Box dia afaka manatanteraka asa mifandraika amin'ny fitadiavana moter crawling, fanehoan-kevitra, fanamarihana rohy, fikarohana teny sy teny SEO.
CloudScrape dia tranonkala mpanamboatra tranonkala sy mpanonta an-tserasera izay manampy amin'ny fanivanana antontam-baovao marobe tsy misy olana. Izy io dia manome antsika ny fitaovana hamahanana ny angon-drakitra amin'ny sehatra fitahirizana rahona toy ny Box..net sy Google Drive. Azonao atao ihany koa ny mitazona ny angon-drakitrao amin'ny endrika CSV sy JSON. Izy io dia iray amin'ireo sampan-draharaham-bary mafonja sy mahery vaika indrindra ao amin'ny aterineto izay manampy amin'ny fikarohana amin'ny alalan'ny tranonkala, mameno ny endrika, mamorona robots ary manala ny angon-drakitra amin'ny fotoana voafetra.
Ny Visual Web Ripper no vahaolana tokana ho an'ny fanodinana rindran-tranonkala maodim-pitantanana ny tranonkala, fanangonana rakitra ary tranokely. Io no iray amin'ireo mpamatsy angon-drakitra mahery vaika indrindra amin'ny aterineto. Ny fitaovana dia manangona angona amin'ny endrika endrika sy sary. Izany dia mametraka ny angon-drakitra mifototra amin'ny fepetra takinao ary ny vokatra dia sarobidy sy ilaina foana.